अनौपचारिक « नेपाली मुटु
Archive for the ‘अनौपचारिक’ Category
खेल भित्रको खेल: MATCH FIXING
खेलाडीमा कुनै उत्साह छैन । न त राम्रो फुटबल खेल्ने प्रयास नै गर्छन् । गोल गर्ने खेलाडीको मुहार पनि उज्यालो देखिँदैन । नत त उनीहरू आफूले गरेका गोलको खुसी नै मनाउँछन् । गोलकिपरलाई छक्याएर खाली पोस्टमा पुर्‍याएको बल पनि गोल लाइनबाट आफैं फर्काउँछन् । अनि आफ्नै गोलपोस्ट वरिपरि रहेका विपक्षी खेलाडीलाई पास दिने गर्छन् । सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा दोस्रो चरणको पछिल्ला खेलका विशेषता हुन्, ती । जहाँ कुनै उत्साह छैन । फुटबलको रोमाञ्चकता पाइँदैन । न त स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा ब्वाइज युनियन र जावलाखेलको खेल दशरथ रंगाशालामा हेरिरहेको भेटिएका चाबहिलका दीपक ढकालले अचम्म मानिरहेका थिए । ‘कस्तो खेल ?,’ अनुहार खुम्च्याएर उनले भने, ‘खेलाडीमा जोस खै ? बलका लागि संघर्ष गरिरहेजस्तो लाग्दैन । कुनै खेलाडीको नियन्त्रणमा रहेको बल खोस्ने प्रयाससमेत गरेजस्तो देखिँदैन ।’
Continue Reading खेल भित्रको खेल:MATCH FIXING >>
Posted in अनौपचारिक | LeaveaComment »
हेरौला विश्वकप : LOADSHEDDING मा
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको गनगन
मनसूनको अपेक्षित समय १० जून (जेष्ठ २७) पछि सबै उत्पादन केन्द्रहरुले पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्ने छ भन्ने अनुमान अनुसार १३ जून (३० जेष्ठ) देखि १५ दिनका लागी कुलेखानी प्रथम र दोस्रो विद्युत केन्द्रहरु मर्मतका लागी पूरै बन्द गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको थियो र सोही अनुसार विदेशी प्राविधिकहरुको आगमन तय भैसकेको छ । तर हालसम्म मनसून आई नसकेको हुंदा र कुलेखानी विद्युत केन्द्र मर्मतका लागि बन्द हुने निश्चित भैसकेको अवस्थामा साविकको लोडसेडिङ्गमा केही परिवर्तन गरी मिति ०६७/०२/३१ गते सोमवार देखि तपसिलको तालिका बमोजिम लोडसेडिङ्ग हुने ब्यहोरा समस्त ग्राहक बर्गमा अनुरोध छ । मर्मत कार्य १५ दिन अगाबै सम्पन्न भएमा वा मनसून आगमन भई अन्य विद्युत केन्द्रहरुमा अपेक्षा गरे अनुसार विद्युत उत्पादन बृद्धि भएमा तत्काल यस लोड सेडिङ्गमा कटौती गरी साविक अनुसारको लोडसेडिङ्ग कायम गरिने छ । Continue Reading हेरौला विश्वकप : LOADSHEDDING मा >>
तपाईंलाई ब्रस गर्न आउँछ ?
मुलुकका ९० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकलाई शरीरका लागि उपयुक्त हुने गरी मुख धुने प्रक्रियाबारे सही जानकारी छैन । यही जानकारीको अभावमा दाँतमा कीरा लाग्ने, गिजाबाट रगत आउने, मुख गन्हाउने र दाँतको रंग बिग्रनेजस्ता समस्याले जोकोही पीडित भइरहेका हुन्छन् ।
‘उचित रूपमा वैज्ञानिक पद्घतिअनुसार दिनहँु ब्रस मात्र गरियो भने मुलुकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी दाँतको समस्या देखिने छैन,’ प्राध्यापक डा.प्रवीण मिश्र भन्छन्, ‘नेपाल मात्र नभई अधिकांश अमेरिकी नागरिकलाई समेत कति समय दिनहुँ ब्रस गर्नुपर्छ भन्नेबारे जानकारी छैन ।’
राम्ररी र उचित रूपमा दाँत माभmने र हरेक ६ महिनामा नियमित दन्त परीक्षण गराउँदा दाँतसम्बन्धी रोगलाई केही हदसम्म सिरियस हुनबाट रोक्न सकिने प्राडा. मिश्र बताउँछन् Continue Reading तपाईंलाई ब्रस गर्न आउँछ ? >>
अन्तर्वार्ताको पूर्ण विवरण- Continue Reading हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो हुँ – ज्ञानेन्द्र >>
हलिउड अभिनेत्रीको सम्पत्ति नेपालीलाई
साँचो नेपाली मनको पुरस्कार
वर्षौंको सेवा र वफादारीको इनाम के हुनसक्छ? नेपाली मूलका अमेरिकी इन्द्र तामाङ उदाहरण बनेका छन्। पहिले घरायसी कामदार रहेका तामाङ अहिले आफै लगभग एक करोड डलर मूल्यको धनसम्पत्तिका मालिक भएका छन्। उनलाई यी सबै सम्पत्ति गत वर्ष ९८ वर्षको उमेरमा निधन भएकी हलिउड फिल्म अभिनेत्री रुथ फोर्डबाट प्राप्त भएको हो। रुथको महल न्युयोर्क सिटीका भव्य महलहरूमा गनिन्थ्यो। रुथको महलसँगै उनका भाइ लेखक तथा फिल्मकर्मी चार्ल्स हेनरी फोर्डको पनि घर छ। सन् २००० मा निधन हुनुअघि चार्ल्सले उक्त घर रुथलाई सुम्पेका थिए। ती दुवै महलका बगैंचा, भान्सा र बैठकमा तामाङले ३५ वर्ष सेवा गरेका थिए र अहिले दुवै महलको स्वामित्व उनमा आएको छ। ‘म एकदम खुसी छु, आफूलाई सम्मानित महसुस गर्दैछु र मालिकहरूको उदारतादेखि निकै प्रभावित छु,’ तामाङले भने। लगभग एक करोड अमेरिकी डलरको मूल्यांकन गरिएको सम्पत्तिमा दुई घर र ती घरभित्र झुन्डिएका दुर्लभ चित्रहरू समावेश छन्।
सन् १९३७ मा बनाइएको रुथकै मुहारचित्र गत महिना १० लाख डलरमा बिकेको थियो। आफूले आफ्ना मालिकहरूसँग स्थापित गरेको दरिलो सम्बन्धका कारण सम्पत्ति पाएकोमा तामाङलाई आश्चर्य भने लागेको छैन। उनल भने, ‘यो मेरो लागि दोस्रो परिवारजस्तै हो र उहा”हरूले पनि मलाई परिवारकै हिस्सा ठान्नुभएको थियो।’
तर, सम्पत्तिसँगसँगै तामाङमाथि लाखौं डलरको करको जिम्मेवारी पनि सरेको छ। त्यसैले उनले दुईमध्ये एक भवनलाई बिक्री गर्ने सोच बनाइसकेका छन् र उनले अपेक्षा गरेको मूल्य हो, ४५ लाख डलर। तामाङ अहिले क्विन्सको छुट्टै घरमा १० वर्षीया छोरी र पत्नीसँग बस्छन्। ‘जहाँ तिम्रो छाना, खाना र नाना छ, त्यहीँ खुसी हुनुपर्छ,’ तामाङले भने। तामाङ नेपालका एक किसान परिवारबाट २२ वर्षको उमेरमा अमेरिकामा प्रवेश गरेका थिए। ‘मैले मेरो बुबाको घर र दुई बच्चालाई घरमा छाडेर अमेरिकामा आई काम गर्न थालेको हुँ,’ उनले सुनाए। Continue Reading हलिउड अभिनेत्रीको सम्पत्ति नेपालीलाई >>
Continue Reading पशुपतिमा एक बिहान >>
यस ब्लगका पाठकहरु र शुभचिन्तकहरुमा नयाँ बर्ष २०६७ सालको सुखद उपलक्ष्यमा सु–स्वास्थ्य, समृदी र सफलताको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
नयाँ बर्षले निकै आशा लिएर आउँछ र, नया बर्षमा सबै आफ्नो सपना पूरा होस भनेर त्यस्कै कुरा गर्छन । तर हाम्रा नेताहरुको शुभकामना सन्देशमा पनि घमण्ड, शंका, सन्देह र आन्दोलनले
आकार लिन सकुन सबैका सपनाहरुले !!!
छोडेन । पढ्नुहोस् शुभकामना सन्देशको केहि अंश –
माधबकुमार नेपाल – स्वाभाविक संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत आफू २२ राजनीतिक दलको सहमति र समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको हुँ। अतिवादका सामू घुडा नटेकि लडिरहन्छु ।
राष्ट्रपति – नेपालको दुरगामी यात्रा बीचबाटोमै अल्मलिने हो कि भन्ने आशंकाले आम नेपालीलाई पिरोलिरहेको छ ।
कमरेड प्रचण्ड – सबैखाले प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रहरूलाई परास्त गर्ने ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न नयाँ वर्ष २०६७ ले सबैमा थप प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास लिएको छु। Continue Reading नयाँ बर्षको शुभकामना !!! >>